Faritra Sava - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Sava)
Distrika Sambava, Andapa, Vohemar, Antalaha
Velarantany 25 518 km2
Isam-ponina 980 807 mpo.
Hakitroky ny mponina 38,44 mpo/km2
Ny faritra Sava dia faritra ao amin' ny faritanin' Antsiranana, any avaratra amin' i Madagasikara. Ny renivohiny dia i Sambava. Ny faritany dia ao amin' ny morontsiraka avaratra-atsinanan' i Madagasikara. Izy io dia mizara sisintany amin' ny faritra Diana, any avaratra-andrefana, sy Sofia any atsimo-andrefana ary ny faritra Analanjirofo any atsimo. Ny isa-mponina dia 805 300 tamin' ny 2004 ary ny velarantany dia 25 518 km2.
Ny faritra Sava dia voazara ho distrika efatra: Sambava, Antalaha, Vohemar ary Andapa. Ny anaran' ny faritra dia avy amin' ny lohasoratr' ireo distrika ireo : Sambava, Antalaha, Vohemar ary Andapa. Ireo tanàna ireo dia milaza-tena ho "Renivohitry ny lavanila", satria io faritra io no tena mpamoaka lavanila indrindra eto an-tany.
Ireto avy ireo distrika ao amin' io faritra io:
Diana · Sava · Sofia · Boeny · Betsiboka · Melaky · Analanjirofo · Alaotra-Mangoro · Atsinanana · Analamanga · Bongolava · Itasy · Vakinankaratra · Amoron'i Mania · Matsiatra Ambony · Vatovavy-Fitovinany · Atsimo-Atsinanana · Faritra Ihorombe · Menabe · Atsimo-Andrefana · Androy · Anosy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Faritra_Sava&oldid=1044836"
Voaova farany tamin'ny 13 Mey 2022 amin'ny 04:04 ity pejy ity.